Xuquuqda macmiisha | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Ku saabsan Iswiidhan / In qofka isku filnaado iyo horumar laga gaaro Iswiidhan / Xuquuqda macmiisha
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 1 10 2021
Qoraalkan wuxuu ku saabsanyahay xuquuqda dadka macmiisha ah. Iswiidhan waxaa ka jira sharciyo ku ilaalinaya marka aad iibsato alaab iyo adeegyo. Sharciyadan waxay ku siinayaan tusaale ahaan xaqa in aad ka dacwooto alaab ciladaysan oo aad iibsatay iyo xaaladaha qaarkood inaad dib uga noqoto wax aad iibsatay.
Waxaad akhrin doontaa waxyaabo ay ka mid yihiin sida aad sameynayso si aad dib uga noqoto wax aad iibsatay, sida aad uga dacwoonayso qaan-sheegasho qalad ah iyo xuquuqaha kale ee aad leedahay macmiil ahaan.
Xaqa loo leeyahay heer nolol oo macquul ah
Dadka oo dhan waxay xaq u leeyihiin heer nolol oo macquul ah. Tani micnaheedu waa in aad xaq u leedahay inaad hesho ama shaqayso lacag kugu filan si adiga iyo qoyskaagu aad u dareentaan wanaag.
Waa inaad awoodo inaad iibsato cunto iyo dhar, haysato hoy iyo awoodo lacagta daryeelka. Haddii aad jirato ama bilaa shaqo noqoto waa in bulshadu caawimaad bixiso si aad u hesho heer nolol oo macquul ah. Carruurtu waxay xaq u leeyihiin amaan bulsho iyo heerka nolol ee ilmo u baahanyahay dhinaca horumarka.
Marnaba lambarkaaga sirta ah ha siin qof
Dad badan waxay kaarkooda bangiga iyo moobilada u isticmaalaan inay wax ka iibsadaan dhinaca intarnatka ama lacag ku bixiyaan gudaha dukaan. Marnaba lambaradaada sirta ah ama erayadaada sirta ah ha siin qof. Cidna ha amaahin kaarkaaga bangiga si lacag loo wareejiyo. Qofka doonaya inuu helo lambarradaada sirta ah ama erayadaada sirta ah wuxuu isku deyi karaa in uu kaa khiyaameeyo lacag. Tani waxaa lagu magacaabaa khayaamo oo waa dembi.
Miyaad wax ka iibsatay dhinaca intarnatka?
Sidee ayaad u ogaanaysaa in aad wax ibsi amaan ah samaysay oo aan lagu khayaamin?
Bixi tusaale ah soo bandhigyada iyo rukumashooyinka soo jiidashada leh ee lagu soo sheegay qoraalkan.
Sidee ayaad samaynaysaa si aad u ogaato haddii soo bandhigid ay fiicantahay ama xuntahay?
Akhriso shuruudaha iibsiga oo eeg qiimaha guud, shuruudaha wakhtiga alaabtan ku imanayso iyo shuruudaha lacag bixinta
Wakhtiga dib uga noqoshada wuxuu bilaabmaa maalinta ka dambeysa markaad heshay alaabtan. Haddii aad adeeg iibsatay waxaa wakhtiga dib uga noqoshada la xisaabiyaa maalinta ka dambeysa markaad gashay heshiiskan. Wakhtiga dib uga noqoshada waa wakthiga aad haysato inaad dib uga noqoto wax aad iibsatay. Dhanka iibka dhinaca iibinta telafoonka waxaa heshiis la galay ugu horeyn marka aad xaqiijisay qoraal ahaan. Shuruuda qoraal ahaan waxay khuseysaa heshiisyada qoraalka ah ee dhanka warqad iyo qaab elaktaroonig ah, tusaale ahaan e-boostada ama fariinta moobilka ee sms.
Marka adiga ama dhinac kale aad ku heshiisaan wax markaasi waxaad gasheen heshiis. Heshiiskani waxaa ku xirmaya labada dhinac oo tani waxay tahay in labadiinuba aad samaysaan wixii heshiiskan lagu ballan qaaday in la sameeyo, tusaale ahaan in dhinac uu keeno alaab ka dibna dhinaca kale uu bixiyo lacagta.
Marka aad wax ka iibsato dukaan ama intarnatka ka ballansato safar waxaad gashay heshiis. Waa inaad ahaato 18 sano si aad heshiis u geli karto. Waxaa jirta faa'iidooyin badan oo heshiis leeyahay iyo qawaaniin kala duwan oo khuseeya kuna xiran waxa aad ku heshiiseen.
Waxaad geli kartaa heshiis hadal ama qoraal ahaan ah labadaba. Dhanka qaababka heshiisyada qaarkood waxaa shuruud u ah in heshiisku yahay qoraal si uu u noqdo mid lagu xirmo, tusaale ahaan iibsashada guri.
Adigu uma baahnid inaad lacag ka bixiso wax aanad dalban
Si heshiis u noqdo ansax waa inaad aqbashay soo bandhigid ama dalbatay wax. Haddii shirkad sheegato inaad wax dalbatay, waa in shirkadaasi ay xitaa caddayn karto arrintan.
Adigu uma baahnid inaad lacag ka bixiso wax aanad dalban, laakiin waxaad mar kastaba u baahanaysaa inaad la xiriirto shirkadan oo ka dacwooto. Ka dacwood micnaheedu waa inaad diidantahay shirkadan shuruudeeda qaldan ee in lacag lagaa qaado.
Qoraal ahaan u dacwood, tusaale ahaan e-boostada oo kaydi nuqulka e-boostadaada ama warqada. Xitaa waajib ma kugu aha inaad bixiso lacagta alaab celinta dhanka wax aanad adigu dalban.Lacagta alaab celinta waa kharashka dib loogu dirayo alaab iibiya. Haddii shirkadani ay doonayso in loo soo celiyo alaabtan waxaad ka codsan kartaa warqada boosta ee lagu celinayo.
Wax ka iibinta dhanka telafoonka
Waa caadi in shirkaduhu soo wacaan dadka si ay wax u iibiyaan. Tani waxaa lagu magacaaabaa iibinta dhanka telafoonka.
Adigu waad ka xannibi kartaa telafoonkaaga haddii aad doonaysid inaad yareyso tirada soo wicitaanka ka imanaya iibiyayaasha dhanka telafoonka. Si aad telafoonkaaga uga xanibto waxaad la xiriiri kartaa NIX-Telefon. Laakiin xusuusnow in taasi aanay joojinayn dhammaan iibiyayaasha dhanka telafoonka. Marka aad telafoonkaaga ka diiwaan-geliso adeegga xanibaadda ma ku soo wici karaan shirkadaha badankooda ee ujeeddadoodu tahay iibinta, suuq geynta ama macluumaad ururinta. Shirkadaha qaarkood, tusaale ahaan shirkadaha aad ka tahay ama ka ahayd macmiil, way ku soo wici karaan sidaa iyadoo ah. Shirkadaha waxaa waajib ku ah inay hubsadaan haddii lambarkaagu ku jiro NIX ka hor intaanay ku soo wicin.
Miyaa uu kula soo xiriiray iibiye dhanka telafoonka ah?
Maxaad badanaaba tiraahdaa si aan lagu khiyaamin?
Rukumasho waa heshiis uu alaab qaybie si joogto ah macmiil ugu soo gudbiyo alaab ama adeeg. Rukumasho waxay ansax ahaan kartaa wakhti cayiman ama joogto ah. Alaab qaybiye waa qofka ama shirkada bixisa alaab ama adeeg.
Rukumasho waxay tusaale ahaan noqon kartaa heshiis in bixiyo koronto, in laga wacdo shirkad moobiil oo gaar ah ama in la daawan karo Tiifiiga lacagta laga bixiyo dhanka kaabalka ama satalaytka.
Badanaaba waa alaab qaybiyaha kuwa soo diyaariya heshiiskan. Heshiiskan badanaaba waa qoraal qaab ahaan loo isticmaali karo xaalado ganacsi oo la mid ah. Tani micnaheedu waa in adigu macmiil ahaan badanaaba aanad raad ku yeelan karin sida heshiiskani u eekaanayo. Adigu macmiil ahaan waxaad dooran kartaa inaad aqbasho heshiiskan rukumashada ama doorato alaab qaybiye kale.
Macmiilka badanaaba waxaa lagu magacaabaa rukunte.
Dabinka rukumashada wuxuu ka koobanyahay soo bandhigid soo jeedasho leh iyo badanaaba carbuun qarsoon. Dhanka intarnatka welib ugu horeyn baraha bulshada waxaa caadi ku ah soo bandhigyo alaab raqiis ah
kuwaas oo keena marka dambe carbuun kharash badan. Tusaale ahaan soo bandhigida in laga qayb qaato baaritaan suuqa ganacsiga ah oo lagu helo iibsashada telafoon qiimihiisu aad raqiis u yahay. Waxaa kale oo ay noqon kartaa soo bandhigid tijaabo dhanka alaab caafimaad taas oo ay u muuqato in kharashka alaabta lagu soo dirayaa uu yahay waxa keliya ee macmiilku u baahanyahay inuu bixiyo. Dabinada rukumashada waxaa kale oo ay ka yimaadaan dhanka telafoon wax ku iibinta.
Hallå konsument ayaa samaysay filimo sharraxaya dabinka rukumashada. Filimadan waxaa lagu helayaa af Iswiidhish oo keliya.
Adigu waxaad heli kartaa talo bixin bilaa kharash ah oo ku saabsan heshiisyada, rukumashada, xisaabaha lacag bixinta iyo deymanka:
Talo-bixinta miisaaniyada dhaqaale iyo deynka:
Waxaad caawimaad ku saabsan dhaqaalahaaga ka heli kartaa degmada aad degantahay. Dhamaan degmooyinku waxay bilaash ku bixiyaan talo-bixinta miisaaniyada dhaqaale iyo deynka.
Degmadaada aad degantahay ka hel caawimaada talo-bixinta miisaaniyada dhaqaale iyo deynka.
Degmooyin badan waxay dadka ku casuumaan hagida macmiisha. Halkaas ayaad la xiriiri kartaa haddii aad u baahantahay caawimaada inaad ka dacwooto alaab ama adeeg aad iibsatay oo xun. Iyagu waxay xitaa ku siin karaan warbixin ku saabsan nooca xuquuqaha iyo waajibaadka aad leedahay adigu macmiil ahaan.
Caawimaad ka hel talo-bixinta laga helo degmadaada.
La xiriir Hallå konsument markaad hayso su'aalo ku saabsan iibsashada alaab iyo adeegyo, ka cabashada alaab la iibsaday iyo wixi.
Dhinaca Hallå konsument boggooda intarnatkana waxaad ka helaysaa warbixin dheeraad ah oo ku saabsan xuquuqdaada macmiil ahaan.